Ulawulo lweHadoop - Isikhokelo esigqibeleleyo - ITS Tech School
Isikhokelo esigqibeleleyo sokulawulwa kweHadoop
Izibonelelo zeHadoop Training
Ngaphandle kweminyaka engama-5, i-Hadoop iza kusebenza yedwa inxalenye enkulu yedatha yehlabathi. I-teknoloji entsha iyatshisa, kwaye iinkampani zifuna imfuno ebalulekileyo yabaviwa abane-certified Hadoop.
Inkqubo yeprogram ye-Java i-Hadoop imele ivule umthombo kwaye isetyenziselwa ukulungiselela iiseti ezinkulu kunye ezinkulu ezifumaneka kwiimeko ze-PC. Njengoko uHadoop isebenzisa iiseva ezithobekileyo ukulungiselela idatha, iinkampani kunye nemibutho efana nokuxhomekeka kwimodeli yokusebenza kwayo indleko. Iintlobo ezahlukeneyo zesakhelo seprogram zibandakanya ukulungelelaniswa kweentlobo ezahlukeneyo zedatha ezihanjiswa ngokubanzi, ukusabalaliseka, ukulungiswa kweendawo zedatha, ukuxhaswa kwamacandelo amaninzi amakhulu, kunye nokulawulwa kweendlela ezizenzekelayo.
Iinqununu ezinkulu ze-2 zesikhokelo solawulo lwe-Hadoop ziquka i-MapReduce ne-HDFS. I-Hadoop izahlulo nganye iinkcukacha eziqhubela phambili zingena kwiipakethi zedatha ezincinci okanye izipakethe kwaye ezi phakethi zedatha zikhutshwa ngaphakathi kwiindawo ezihlukeneyo kunye neendawo ezahlukeneyo, iindawo ezihlala ngaphakathi kumaqela. I-Hadoop yithuba elikhethekileyo kwaye ixesha layo lokukhupha idatha enkulu okanye encinci kwimemori yesangqa incinci kakhulu. I-Hadoop iphinda iphinde ichaze yonke idatha ngoomatshini ohlukeneyo okhoyo ngaphakathi kweqela kwaye eziphindwe zenziwe ngokuthe ngqo kwi-replication factor. Njengoko iinkcukacha ezahlukeneyo zeedatha zingalungiselelwa ngokukhawuleza ngexesha elifanayo, ixesha lokuphatha idatha liyancitshiswa.
I-Hadoop isitifiketi ibonisa ukuba ungasebenzisa isakhelo solawulo lweedatha ukwenzela ukwandisa umveliso wombutho. Izinkampani namhlanje zihlala zikhangela abaphathi be-Hadoop, ababonisa ukuthembeka kunye nezobuchule ozinzileyo zokuthatha izibophelelo zomsebenzi ezinxulumene nokuphathwa kweDig Data.
Kutheni iHadoop Certification yoMsebenzi wakho?
I-Hadoop yindlela entsha yokusingatha idatha enkulu, kwaye i-Hadoop iqinisekiswe ngabaqeqeshi abafunekayo kwi-inshurensi, ukunakekelwa kwezempilo, i-finance, ukuthengisa, ubunzima kunye namacandelo amaninzi ezoshishino kunye neendlela ezibonakalayo. Ukuphunyezwa kwe-Hadoop kuye kwasebenza ngokugqithiseleyo kwaye abaninzi abaqeqeshi be-IT baye batshintsha indlela yabo yomsebenzi ukuze bafumane i-teknoloji entsha. I-Hadoop okwangoku iyakuthandwa kwi-Mainframe, iJava, kunye neendawo zokugcina idatha kunye nekamva elizayo, isakhelo esitsha siya kuba yisigqibo esinqununu sokuhlalutya kwedatha nokulungiselela.
Uqeqesho lweHadoop kunye nesitifiketi sineenzuzo ezahlukahlukeneyo zootitshala bezobugcisa be-IT kunye neentlanzi.
Isatifikethi siyimfuneko kwaye iinkampani zifuna abaviwa abachaphazelekayo kunye nezobuchule beHadoop.
I-Hadoop isatifikethi idlulisela kuwe kokubili umvuzo kunye nokunyuka kweemeko, kwaye unako ukufumana okungaphezulu kwabanye emva kokudlula ikhosi ngokufanelekileyo.
Abo batsha kwisikhokelo se-Hadoop kunye nemeko bangadlulisela isatifikethi kwaye bafumane oko kuthatha kwaye ulwazi malunga nokuthotyelwa kwesikhokelo kunye nokuphunyezwa kwayo.
Njengoko uqeqesho luxesha lokwenene kwaye lukhuthaza ukuba uphathe iimeko zehlabathi zangempela kunye nedatha, isatifikethi sibonisa ukuba unezandla ezantsi ukubandakanyeka kwiindawo ezikhanga.
Ubonisa ukuba uyazi zonke iinkalo zobuchwepheshe bwakutshanje kwaye unokukunceda abanye ukuba baqeshwe yinkampani.
Imiyalelo yesinyathelo ngesinyathelo ukulungiselela iHadoop Certification
Ikhosi ye-Hadoop yokuqinisekisa iquka ii-30 iiyure ze-intanethi kwaye zihlala ngokuqeqeshwa ezilungiselelwe kwaye zinikezwa ngabaqeqeshi abaqeqeshiweyo, abagunyazisiweyo nabaqinisekisiweyo. Unokufumana ukulungelelaniswa kwezixesha othanda ukuzenza kuzo. Kuya kufuneka uthabathe izabelo, kwaye imeko yonyani yokwenene igxininisa ukuba uncedo lokufumana isandla kwiimeko zangempela zomsebenzi wehlabathi. Kukho iingxaki ezimbalwa ezifunekayo ekufundeni ikhosi, njengomthengisi wekholeji ekhompyutheni ye-intanethi uza kukunika i-24 * 7 efumaneka kwi-bolster ye-intanethi ephuma ngqo kwiingcali. Ubuye ufinyelele iingxoxo apho unokuyolonwabo ukuhanjiswa kwesikhokelo kunye nokwabelana ngengqiqo yakho xa ufumana kwiintlanganiso zabanye. Ngaphandle kwezi nzuzo kunye neenzuzo zezifundo, ufikelela kwisikhokelo solawulo lokufunda, esihlala sihlaziya ubuchule bakho kunye nekhono lakho kwaye kukubangela ukuba uhlale ungahambisani nokuphuculwa kwangoko kunye neenguqu ezinxulumene neHadoop.
Izifundo eziphambili kunye neengqungquthela eziqinisekisiwe yikhosi ye-certified Hadoop ziquka:
I-Hadoop kunye ne-Big data izakhiwo
I-HBase ne-Hive ephezulu
UHadoop no-Oozie bandisa
Ukucwangciswa nokusabalalisa kwedatha ngokusetyenziswa kwe-Apache Spark
Isiseko semfundo ye-intanethi siza kusungula umatshini ochanekileyo ngaphakathi kwesikhokelo sakho sePC kwaye uza kukunika ukufikelela kwendawo. I-LMS okanye iNkqubo yoLawulo lokuFunda iya kuba nayo yonke inkcazelo yokukhuphela kunye neyokufowunelwa ukuba kufuneka ufumane ikhosi. Ucwaningo lwezifundo luya kufika kuwe ekugqibeleni kwekhosi kwaye uya kusebenzisa izikhokelo zentlabathi yezakhiwo ezifana ne-HIVE, i-PIG, i-MapReduce kunye ne-HBase ukwenza uhlalutye kwi-Big Data ngexesha langempela. Ezi zifundo zecandelo lucandelo-ngokukhethekileyo kwaye zihambelana nommandla weshishini kubandakanya iindaba, i-aircraft, ivenkile, i-finance, nabanye.
Njengoko sonke iseshoni yokufundisa kunye nokuqeqesha isuswa ngaphakathi kwe-LMS, awuyi kuziva ulahleko lwazo naziphi na iiklasi kwaye unokuzifumana nanini na kunqwenela. Ngaphandle kwe-LMS, iiseshoni ezihlala ziphinde ziqhube iiklasi kwakhona kwiibhetshi ezahlukileyo kwaye ungafunda izifundo ozilahlekileyo kule dilesi okanye kwiklasi yeseshoni.
Ziziphi iimfuno zeHadoop Certification?
Nangona kungekho mfuneko ekukhetheni isitifiketi se-Hadoop, kungcono kwithuba lokuba unolwazi olunxulumene neS SL kunye neCore Java. Unokufunda iinjongo zeJava okanye ungazibhinqa ngokujoyina enye inkqubela.
Ufuna i-PC kunye ubuncinane ne-4 GB ye-RAM, kunye nomprosesa we-i3 (okanye ngaphezulu) ukujoyina ikhosi kwi-intanethi kwaye ufunde ngokufanelekileyo. Ukuba unokuphumelela ukufezekisa nayiphi na isakhelo, kufuneka unikwe ukufikelela okude kwiqela le-Hadoop ngesiseko sakho sesatifikethi.
Kutheni iHadoop yoQeqesho ku funeka kuSebenzi Yakho?
Eyona nto ibalulekileyo yeenkampani zehlabathi, kubandakanywa iMNCs yobukhulu obukhulu badinga abaqeqeshi be-IT abangakwazi ukulawula ixabiso elikhulu leemfuno ekufuneka basebenzise okanye bagcine. Ubungakanani bwedatha bunokuba namandla kakhulu kwaye bukhenkce ulwazi oluchanekileyo nolungileyo lube ngumsebenzi onzima. Abantu abadlula i-Hadoop isatifikethi ngokufanelekileyo bayakwazi ukufezekisa injongo kunokuba lula. Njengoko uhlaka lweHadoop lufumana ithuba lokuba lube lufanelekile kwaye luphela kwiveki nganye edlulileyo kunye neenyanga, isatifikethi kule ndawo sinokukubonisa ukuba uphumelele kakhulu kwi-specialty.
Amaziko okuqeqesha i-Hadoop azakuhambisa lonke i-Big Data ukulungiselela amakhono kwaye ijolise ukukwenza ube ngumsebenzi oqinisekisiweyo woBuchule beData. Izandla ezantsi zoqeqesho zihambelana neenkqubo ezamkelweyo kunye nemeko yeMephuReduce, i-HDFS, i-HBase, i-pig, i-Hive, iSqoop, i-Oozie kunye nezinye iindlela zokuphatha izakhiwo. Ukuqeqeshwa kweHadoop kukunika ubuchule obufanelekileyo kunye nokufunda kwiindawo ezibandakanya:
Iinkalo ezahlukeneyo zolwazi
Ukuqonda kwe-Hadoop 2x izakhiwo
Ukusekwa kweqela le-Hadoop kunye nokuqulunqwa kweeprogram zokunciphisa imephu yeengqondo
Ukuqala kwi-analytics yedatha ngokusebenzisa i-Hive, iPig, kunye ne-YARN phakathi kobugcisa obuhlukeneyo kunye neemodeli
Ukuhlanganiswa kweMephu Ukunciphisa nokusetyenziswa kwe-H Base
Ukucwangciswa kwemisebenzi nge-Oozie
Ukusebenza kwi-RDD ukuqonda kwe-Spark kunye ne-system yayo ye-biological
Ukuthatha udonga kwimpilo yinyani iyaqhubeka kwaye iphande i-analytics ehambelana nedatha enkulu.
Uphando olulandelayo lubonisa ukuba ukubaluleka kweHadoop njengesiCwangciso seNtloko sokuSebenza kwedatha kuya kunyuka kwixesha elizayo. Iingxelo zithi i-Hadoop imakethi iya kubakho i-$ 99.31 yezigidigidi ngaphambi konyaka kwi-2022, kwaye iza kuphuhlisa ngesantya se-42.1 esiseduze.
Ukufunda idatha enkulu kunye neHadoop ivelisa i-fresher kunye nabaqeqeshi be-IT abaqeqeshiwe. Iinjineli, abakhi bezakhiwo, uvavanyo, i-BI, i-DDW, kunye nabafundi be-ETL banokufunda ukukhulisa iimpawu zabo kwaye basebenzise ekusebenzeni okukhulu kwedata.
Inkosi ye-intanethi yoqeqesho yaseHadoop kwi-Intanethi iya kuhlola usebenziso lwakho lokugqibela, kwaye kwithuba elihle lokuba uphumelele isatifikethi ngempumelelo, uya kunikelwa isitifiketi seBig Data and Hadoop. Isatifikethi siyazisa ukuvuma nokuwamkelwa okukhulu. Iinkampani ezininzi ezikhokelayo kunye nee-MNCs ziqabane eziqeqeshwe kwiziko loqeqesho oludumileyo kunye neziseko zokuqeqesha, kwaye ziquka iWipro, i-Nokia, i-Cisco, i-Ford, i-IBM kunye nezinto ezifana. Unokuqiniseka ngokuqinisekileyo ukuba isatifikethi sakho sinyanisekile kwaye siya kukunika umsebenzi ophezulu wokungaziwayo kunye nomvuzo.
Isitifiketi seHadoop siya kukufumana umvuzo we $ 98 k okanye ngokuqhubekayo kunye namava, umvuzo unyuka ngakumbi. Kukho imisebenzi engaphezulu yezigidi ze-4.4 zedatha kuwe ngoku, kwaye iingcango ezivulekile zanda ngezinga le-12%. Abaqambi be-Hadoop bangcono kakhulu kwaye baninzi emva kokuba idatha yakha namhlanje, kwaye unokujoyina i-bandwagon ngoku ukuphanda i-skylines entsha.